Ilitye eliyigugu lomlilo-Uhlaziyo olutsha lwe-2021 -Ividiyo enkulu
Intsingiselo yomlilo. Senza ubucwebe besiko ngamatye asikiweyo okanye ekrwada omlilo asethwe njengamacici, amakhonkco, isacholo somqala, isongo okanye isangqa.
I-opal yoMlilo iyabonakala kwi-opal eguqukayo, enemibala efudumeleyo yomzimba omthubi ukuya kuorenji ukuya kobomvu. Nangona ingahlali ibonisa nawuphi na umdlalo wombala, ngamanye amaxesha ilitye liya kubonisa ukukhanya okuluhlaza okuqaqambileyo. Owona mthombo udumileyo yimeko ye- Querétaro eMexico, ezi opals zibizwa ngokuba zii-opal zomlilo zaseMexico.
Amatye ekrwada angabonisi umdlalo wombala ngamanye amaxesha abizwa ngokuba ziijeli opals. Amanqaku aseMexico ngamanye amaxesha anqunyulwa kwimicimbi yokubamba i-rhyolitic ukuba kunzima ngokwaneleyo ukuvumela ukusika nokupholisha. Olu hlobo lwe-opal yaseMexico lubizwa ngokuba yi-opera yeCantera. Uhlobo lwe-opal oluvela eMexico, olubizwa ngokuba yi-opal yamanzi yaseMexico, lupal engenambala ebonisa ukuba liluhlaza ngaphakathi okanye ngegolide ngaphakathi.
Umlilo opal ovela eMexico
Ilitye elimnyama lomlilo
Ilitye lomlilo phantsi kwemicroscope
Lenziwe ngantoni ijwabu lomlilo?
Ngaba i-opal yomlilo iyabiza?
Luhlobo luni lwerwala opal umlilo?
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-opal kunye ne-opal yomlilo?
Ngubani omele anxibe i-opal yomlilo?
I-Girasol opal ligama ngamanye amaxesha ngempazamo kwaye lisetyenziswe ngendlela engeyiyo ukubhekisa kwilitye le-opal eluhlaza, kunye nohlobo olucacileyo kuhlobo lwe-quartz yemilky evela eMadagascar ebonisa i-asterism, okanye inkwenkwezi, xa isikwe ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, i-opera yenyani ye-girasol luhlobo lwe-hyalite opal ebonisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okanye ukulandela okulandela umthombo wokukhanya ujikeleze.
Ayisiwo umdlalo wombala njengoko ubonwe kwi-opal exabisekileyo, kodwa endaweni yoko sisiphumo sokufakwa kwezinto ezincinci. Ngamanye amaxesha kubhekiswa kuyo njenge-opal yamanzi, nayo, xa isuka eMexico. Iindawo ezimbini ezibalaseleyo zolu hlobo lwe-opal yi-Oregon neMexico.
I-opal yasePeruvia ekwabizwa ngokuba yi-blue opal yi-semi-opaque ukuya kwilitye eliluhlaza-oluhlaza olufumaneka ePeru, elihlala lisikwa ukubandakanya i-matrix kumatye e-opaque ngakumbi. Ayibonisi umdlalo wombala. I-opal eBlue nayo ivela e-Oregon kwingingqi ye-Owyhee, kunye nase-Nevada ejikeleze iVirgin Valley, e-USA.
Akukho opal umlilo omnyama. Zonke izinto ezimnyama ezihonjisiweyo zimnyama ukuba kutheni kungenxa yokungaqondi. Abantu abaninzi kunye nabathengisi begem (abangazizo i-gemologists) badidekile amagama amatye okanye banike igama elingalunganga kumatye. Mhlawumbi bazama ukuchaza i-opal emnyama ngomdlalo weempawu zembala kumphezulu.
Ilitye elinqabileyo elinentsingiselo kunye neempawu zokukhupha ubuntu bomnini. Njengoko igama libonisa, eli litye lifuzisela "ilangatye" kwaye linamandla amakhulu.
Unokuwasebenzisa ngokufanelekileyo amandla akho ngokutshisa amandla akho. Kukulungele ukusebenzisa xa ufuna ukufezekisa iphupha lakho okanye injongo.
Yenziwe kubunzulu beentaba-mlilo zamandulo, ilitye elinqabileyo lenziwa xa amanzi engena kwilitye elityebileyo le-silica, lizalisa ii-seams zalo kunye nemingxunya. Phantsi kobushushu obungakholelekiyo kunye noxinzelelo, lava ibambe amanzi ngaphakathi kuyo, yenze le imilingo, amathontsi aqaqambileyo elanga.
Owona mbala ubaluleke kakhulu ubomvu. Iorenji notyheli ziqheleke kwaye zitshiphu, kodwa ezi hues zisezona zibiza kakhulu xa kuthelekiswa neminye imibala ye-opal. Nokuba ngowuphi umbala, kokukhona umbala unamandla, kokukhona ubaluleke ngakumbi.
Kwisayensi ye-mineralogy, le gem ayisiyo izimbiwa, kodwa i-amorphous mineraloid. Oku kuthetha ukuba ayinayo i-crystalline isakhiwo njengoko i-mineral real. Njengazo zonke ezinye iintlobo ze-opal, Kukuqokelelwa kweesilica ezincinci.
Ilitye lilungile. Amacici e-opal omlilo enziwe ngokucacileyo kwi-opal eguqukayo, enemibala efudumeleyo yomzimba omthubi ukuya kuorenji ukuya kobomvu. Nangona ingahlali ibonisa nawuphi na umdlalo wombala, ngamanye amaxesha ilitye liya kubonisa ukukhanya okuluhlaza okuqaqambileyo.
Umntu ozelwe eneempawu zodiac Taurus kunye neLibra kufuneka ayinxibe. Kuyacetyiswa kakhulu komnye umntu, oneMahadasha okanye uAntardasha waseVenus Shukra kwi-horoscope. I-Opal iluncedo kakhulu kubantu abanengxaki yokungachumi, iingxaki zesondo, iLibido kunye nokungabi namandla.
Ilitye lomlilo lendalo liyathengiswa kwivenkile yethu
Senza ubucwebe besiko ngamatye asikiweyo okanye ekrwada omlilo asetelwe njengamacici, imisesane, isacholo somqala, isongo okanye isangqa… Nceda Qhagamshelana nathi ngesicatshulwa.
Umlilo opal 7.36 ct